Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitokana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitokana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Organic Simia / Inona no maha samy hafa Conjugated sy mitoka-monina Double Bond
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitokana
25 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitoka-monina dia ny fatorana indroa mifamatotra dia manondro firafitra biolojika manana fatorana roa sosona sy fatorana tokana , fa ny fatorana indroa mitokana kosa dia manondro firafitra biolojika izay tsy misy fatorana roa sy tokana mifandimby ary ny fatorana roa sosona dia amin'ny fandaharana tsy misy dikany.
Ny teny hoe fatorana roa sosona amin'ny simia dia manondro firafitra iray misy atôma roa mifamatotra amin'ny alàlan'ny fatorana sigma sy fatorana pi . Ao amin'ny simia biolojika, ny fatorana roa sosona dia singa iray lehibe amin'ny fitambarana biolojika izay misy fatorana sigma sy fatorana pi eo anelanelan'ny atôro karbonika roa.
2. Inona no atao hoe fatorana roa sosona
3. Inona no atao hoe Bond Bond mitokana
4. Conjugated vs Isolated Double Bond amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Fifanarahana mifamatotra mifanakaiky sy mitokana
Inona ny fatorana mifamatotra?
Ny fatorana indroa mifamatotra dia fatorana roa na maromaro izay sarahan'ny fatorana tokana. Raha atao teny hafa, raha misy fatorana roa mihoatra ny roa amin'ny rafitra simika, ireo fatorana roa sosona ireo dia voalamina amin'ny fomba mifandimby amin'ireo fatorana tokana.
Rafitra mifangaro mifamatotra amin'ny fatorana roa sy fatorana tokana no mahatonga ny fiforonan'ny rafitra mifangaro manana elektrônaly voafafa . Midika izany fa ny rafitra mifangaro dia misy elektrôna miparitaka manerana ny rafitra mifangaro fa tsy misy amin'ny toerana raikitra amin'ny fatorana roa. Ity dia antsoina hoe delocalisation. Ity delocalisation ity matetika dia mampihena ny haavon'ny angovo ao amin'ilay rafitra, amin'izay mampitombo ny fahamarinan-toerana. Ny fatorana indroa mifangaro dia mety hitranga amin'ny rafitry ny peratra, ny rafitra acyclic, ny rafitra mitohy, na ny rafitra mifangaro izay manana rafitra cyclic sy linear.
Ny teny hoe conjugation dia manondro ny fampifangaroana na ny fifandimbiasan'ny orbital p an'ny atôma iray miaraka amin'ny orbital p hafa ao anatin'ny fatorana sigma mifanakaiky. Noho izany, ny rafitra mifangaro dia manana faritra iray izay mifanindran-dàlana ny orbitaly p.
Inona ny fatorana mitokana mitokana?
Ny fatorana roa sosona dia fatorana simika vita amin'ny fatorana sigma sy fatorana pi. Matetika, io teny io dia ampiasaina raha ny fatorana roa sosona amin'ny rafitra biolojika dia tsy voalamina amin'ny fomba mifandimby amin'ireo fatorana tokana. Raha atao teny hafa, ny fatorana indroa mitokana dia manana fatorana tokana roa na maromaro eo anelanelan'izy ireo ary nalamina tamina fomba tsy nahy.
Noho izany, ireo fatorana roa sosona ireo dia mirona handray anjara amin'ny fanehoan-kevitra simika toy ny hoe misy fatorana roa sosona ao amin'ilay fitambarana. Eto, tsy toy ny amin'ny rafitra mifangaro, tsy misy delokalisasy elektronika mitranga. Izany dia satria ny fatorana roa sosona dia misaraka, ary tsy misy ny mety ho fiparitahan'ny orbital p.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitokana?
Ny fatorana mifamatotra sy mitoka-monina dia karazana fatorana roa sosona. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fatorana mifamatotra sy mitoka-monina dia ny fatorana indroa mifamatotra dia firafitra biolojika manana fifamatorana indroa sy fatorana tokana, fa ny fatorana indroa mitokana kosa dia rafitra biolojika izay tsy misy fatorana roa sy tokana mifandimby ary ny fatorana roa sosona dia ao a fandaminana kisendrasendra.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny fatorana indroa mifangaro sy mitokana amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Firaisana mifamatotra mifanilika vs mitokana
1. “ 14.5: Fatorana roa misy olona roa mifanakaiky: Dienes mifamaly .” Chemistry LibreTexts , tranomboky, 14 Jolay 2020.
1. “ 1,3-pentadien ” Nosoratan'i Cäsium137 (D.) - Sangan'asa (lahatsoratra an-tsoratra: selbst erstellt) (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. " Diazomethane-pi-system " Nosoratan'i Ben Mills - Asa manokana (Public Domain) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny 1-Butyne sy 2-Butyne Fahasamihafana eo amin'ny kôntôlôjika sy ny heterôklika Fahasamihafana eo amin'ny Flavonoids sy Polyphenols Fahasamihafana eo amin'ny asidra Benzoic sy Ethyl Benzoate Fahasamihafana eo amin'ny fihetsik'i Wittig sy Wittig Horner
Filed Under: Simia Organika
Fahasamihafana eo amin'ny zavamananaina tsy mitovy amin'ny lahy sy ny vavy
Fahasamihafana eo amin'ny pelaka sy ny transgender
Fahasamihafana eo amin'ny rolaida sy ny tums
Fahasamihafana eo amin'ny Nominaly sy ny Ordinal
Fahasamihafana eo amin'ny tsikirity sy ny atelina
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Haemophilus Influenzae sy Haemophilus Parainfluenzae
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tunneling sy ny undermining
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny evaporation sy ny kristaly
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PCV13 sy PPSV23
Fahasamihafana eo amin'ny mpandraharaha sy ny Intrapreneur